Muchikamu chino, isu tichapa rumwe ruzivo nezve mawanirwe eGerman mudzidzi vhiza kune avo vanoda kuenda kuGerman semudzidzi. Zvichakadaro, zvinofanirwa kuyeuchidzwa kuti pamusoro peiyo ruzivo irimo muchinyorwa ichi, rumwe ruzivo uye zvinyorwa zvinogona kukumbirwa, shanyirawo iro peji reGerman.
Zvisinei nechikonzero chekufamba, fomu rekunyorera rinofanira kutanga rakazadzwa maGerman mafambiro ekuenda. Inodikanwa kushandisa peni nhema uye zadza zvese zvakasara nemavara makuru paunenge uchizadza fomu rekunyorera. Fomu rakagadzirirwa reGerman vhiza rekunyorera rinotumirwa kunzvimbo yekunyorera pamwe chete nemunhu wekufamba uye zvimwe zvinyorwa zvinokumbirwa zvinoenderana nechikonzero.
Iyo vhiza inodikanwa kuGerman ndeimwe yemavisa anodikanwa kune nyika dzeSchengen, uye nekuda kwechikumbiro cheminwe chakaburitswa muna 2014, vanhu vanofanirwawo kuenda kana vachinyorera. Sezvo isu tichida kupa ruzivo nezve iyo vhiza application ruzivo iyo vadzidzi yavanoda kugashira mune yedu chinyorwa, isu tichakupa iwe zvaunoda kuti uzive pasi pezita reVadzidzi Visa Chikumbiro cheGerman.
Germany Shanyira Visa Zvinyorwa zveVadzidzi
Zvinyorwa zvinodiwa kune avo vanoda kuenda kuGerman nevadzidzi vhiza zvinosanganisira pasipoti, fomu rekunyorera uye account account yebhangi. Pazasi iwe unogona kuwana ruzivo rwakadzama rwemusoro wega wega.
Pasipoti kuvimbika kunofanirwa kuenderera kwemwedzi mitatu mushure mekunge vhiza yagamuchirwa.
Izvo hazvifanirwe kukanganikwa kuti pasipoti yauinayo haifanirwe kudarika makore gumi uye angangoita 10 mapeji anofanira kunge asina chinhu.
Kana iwe uchizonyorera pasipoti nyowani, unodikanwa kuti utore pasipoti dzako dzekare uende nadzo. Uye zvakare, kune yemudzidzi vhiza kunyorera kuGerman, mufananidzo peji repasipoti yako uye kopikopi yemavisa awakatambira mumakore ekupedzisira e3 anodikanwa.
Fomu rakakumbirwa rinofanirwa kuzadzwa nekutarisa kune zvakataurwa pamusoro apa.
Kuchenjerera kunopihwa kukero chaiyo uye ruzivo rwekuonana.
Kana iye mudzidzi achinyorera vhiza ari pasi pezera re18, vabereki vake vanofanirwa kuzadza nekusaina fomu pamwe chete.
Pamwe nefomu rekunyorera, 2 35 × 45 mm biometric mifananidzo inokumbirwa.
Chiitiko cheakaundi yebhangi
Iye anenge achinyorera anofanira kunge aine ruzivo rweakaundi kubhengi akamumiririra uye panofanira kunge paine mari muaccount.
Chitupa chemudzidzi chine siginecha nyoro chinodiwa nechikoro.
Kune munhu wega wega pasi pemakore gumi nemasere, zita rekubvumirwa rinokumbirwa kubva kuna amai nababa panguva yekushandisa.
Zvakare, kune avo vari pasi pemakore gumi nemasere, zvinyorwa zvinotsanangurwa zvichienderana neboka revabereki vavo zvinokumbirwa, sezvo mari ichafukidzwa nevabereki vavo.
Siginecha sampuli yevabereki inotorwa.
Iye munhu achagamuchira vhiza anofanira kupa kopi yechitupa, kopi yegwaro rekuzvarwa, inishuwarenzi yehutano hwekufamba.
Kana iwe uchizogara kuhotera, ruzivo rwekuchengetedza runodiwa, kana iwe uri kugara nehama, tsamba yekukoka inodiwa.